Inona no SEO amin'ny Intent Marketing?
Ny fikirakirana amin'ny finiavana dia ny momba ny fampifandraisana ny SEO sy ny votoatiny. Rehefa mifangaro am-pahamendrehana dia lasa fitaovam-piadiana tsy mety resy ny SEO sy ny varotra ao amin'ny votoatiny izay manampy ny orinasa misongadina amin'ny mpandray anjara.
Amin'ny 2017, ny fihaonana sy ny fampivoarana ny fangataham-bokan'ny mpanjifa dia ny hahatonga ny marika hita maso, mandresy lahatra ary manintona amin'ny mpanjifa. Na dia tian'ny ankamaroan'ny olona aza ny mieritreritra fa mifototra amin'ny zava-misy sy lojika ny safidiny, dia mbola mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanapahan-kevitra isan'andro ny fihetseham-po.Mahatsiaro ny traikefa ny olona, ​​fa tsy ny lahatsoratra - мебель рачев интернет магазин. Izany no mahatonga ny famoronana lahatsoratra izay mitongilana amin'ny mpihaino anao dia ny fanalahidin'ny fandraisana anjaran'izy ireo.
Content dia singa fototra ao amin'ny SEO Marketing Strategy
Tao anatin'ny taona vitsy lasa, ny fiantsenana an-tserasera dia nanjary iray amin'ny fomba tena tsara indrindra hividianana fividianana. Izany no tena antony mahatonga ny votoatin-tranonkalanao atao mba hanatsara kokoa araka izay tratrany mba hamporisihana sy hisarihana ireo mpanjifa mety ho azy na aiza na aiza. Soa ihany fa afaka mahatratra ity tanjona ity mora ianao amin'ny fampifangaroana ny SEO sy ny ezaka ara-barotra afa-po amin'ny asa tokana.
Tadidio fa ny fanavaozana ny motera dia tena zava-dehibe amin'ny fahafantarana ny votoaty. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia mamantatra ireo teny fototra izay mametraka tanjona ara-barotra. Izany rakitra izany dia hanampy anao hahatakatra tsara kokoa ny tanjon'ny mpanjifa izay hanampy anao hamoaka ny votoatiny voalohany izay mety hiova fo kokoa.
Ahoana ny fampifandraisana SEO amin'ny Marketing?
Tadidio: ny famolavolana programa fanatontosana votoaty dia mila fotoana sy ezaka be. Ireo manam-pahaizana momba ny seminera dia manoro hevitra anao mba handinihanao ireo tetika ireo amin'ny fananganana drafitra fanatsarana ny votoatinao:
Ny mahafantatra ny mpihaino dia tsy maintsy
Ity manaraka ity no zavatra manan-danja indrindra: anisan'izany ny vokatra, ny serivisy, ny traikefa ary ny paikady ara-barotra, dia tokony hisolo tena ny mpanjifa. Ny famaritana ny mpihaino kinendry dia manampy anao hamorona votoaty mahafinaritra amin'ny lohahevitra mifanaraka amin'izay ilainao amin'ny mpanjifa.
Fitsipika volamena: raha takatrao ny antony manosika ny mpihaino anao, dia misy safidy maro azonao omena votoaty manan-danja izay manampy amin'ny fitomboan'ny fidiram-bola, fitomboan'ny fiara, ary fampitomboana maharitra.
Ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana ny votoatiny
Fanamarihana: ny singa rehetra azonao dia tokony hanana antony iray. Amin'ny ankapobeny, ny tanjon'ny votoaty dia ny fampahafantarana, ny fanabeazana ary ny fialamboly. Tohizo ny tanjonao ao an-tsainao rehefa mamorona tetika matihanina.
Ny dingana manaraka dia manatsara ny votoaty ho an'ny fahitana be indrindra. Ireo manam-pahaizana momba ny Semalta dia manoro hevitra mba hampiasana ireto toro-hevitra manaraka ireto rehefa manatsara ny votoatin'ny tranonkala:
Fidio ireo lohahevitra mahaliana sy mahaliana izay mifototra amin'ny fahalinana, fitondran-tena ary demografika;
Ampidiro ny teny fanalahidy havanana;
Hamafiso ny votoatin'ny fitaovana finday.
Ny soso-kevitra iray hafa dia ny mifantoka amin'ny kalitao fa tsy ny habeny. Tadidio fa ny votoaty bebe kokoa dia tsy midika hoe votoaty tsara kokoa. Miharihary fa te-handany votoaty sarobidy izay tiany, manan-danja ary manampy azy ireo ny olona.
Mamaritra ny valin'ny asa tsara kokoa
Araka ny filazan'izy ireo, izay tsy azo refesina dia tsy afaka ampitomboina. Soa ihany, ireo andro ireo dia azonao atao ny mamaritra mora foana ny ROI anao amin'ny fanaraha-maso ny mason-tsivana ary ny fahazoana mijery tsipiriany momba ny votoatin-javatra amin'ny soso-kevitra vitsivitsy monja.
Afaka mianatra avy amin'ny fanentanana rehetra ianao, na mahomby na tsy mahatratra ny tanjona. Ny fandrefesana sy ny fanaraha-maso dia manampy anao hamantatra izay nahatonga anao hiorina tsara indrindra. Raha manao izany ianao, dia afaka mamerina manova ireo fomba mahomby, ka manatsara ny tetikasan-tsosotra SEO ho an'ny tsara kokoa.
Araka ny hitanao, ny fampifangaroana SEO sy ny dokam-barotra an-tserasera dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampitombo ny fifamoivoizana ao amin'ny tranokala ary manintona avo. Araho ny tetika voalaza etsy ambony ary jereo izay mitranga ao amin'ny tranonkalanao!